Ady amin'ny hanoanana any Atsimo :: Hizaràna sakafo isan’andro ireo mponina lasibatry ny kere • AoRaha
Ady amin’ny hanoanana any Atsimo Hizaràna sakafo isan’andro ireo mponina lasibatry ny kere
Hitondra vahaolana amin’ny kere any amin’ny faritra Atsimo ny fanjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Mponina, fiahiana ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy. Mponina arivo isan’andro amin’ireo distrika fito iharan’ ny hain-tany no hizaràna sakafo mandritra ny telo volana, manomboka amin’ny herinandro.
Olona dimy alina sy dimy hetsy (550 000) any Atsimon’i Madagasikara no tsy ampy sakafo vokatry ny hain-tany sady mila fanampiana vonjimaika, araka ny tatitra avy amin’ny Fandaharanasa manerantany momba ny sakafo (Pam).
“Hisy ny fanomezana sakafo ny mponina any amin’ny distrikan’ Amboasary, Betroka, Bekily, Ampanihy, Tsihombe, Beloha ary Ambovombe”, hoy Randriamananjara Naina, tale jeneraly misahana ny fiahiana ny mponina eo anivon’ ny minisiteran’ny Mponina.
Notaterin’ireo olom-boafidy avy any an-toerana fa ny 70%-n’ ny mponina ao amin’ny distrikan’ Amboasary Atsimo no tratran’ny kere, amin’izao fotoana izao. Tsiahivina fa zaza valo, samy latsaky ny dimy taona, no namoy ny ainy, tamin’ny herinandro lasa teo tao amin’ny kaominina Ifotaka vokatry hanoanana.
Fanahiana fitomboan’ ny tra-boina
Ahiana hitombo ny isan’ireo maty raha tsy misy ny vahaolana maika, araka ny nambaran’ny solombavambahoakan’Amboasary Atsimo. Tsy ny any Amboasary Atsimo ihany fa mikaikaika ihany koa ireo kaominina sivy mandrafitra ny distrikan’i Tsihombe, ankehitriny, noho ny kere.
“Tena maina ny tany, tsy misy ny vokatra sy ny rano ary tsy misy ny asa. Mitombo ireo olona marefo. Efa mivarotra lovia sy vilany ny olona ary betsaka ireo nandositra nitsoa-ponenana, tahaka ireo nifindra nankany Mahajanga sy Morondava. Mbola atahorako ny zava-mitranga, amin’ny volana oktobra. Tena tsy azo afenina intsony. Efa miverimberina foana ny toy izao isan-taona. Tokony sakafo aloha no hamonjena ny olona”, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Tsihombe, Masy Goulamaly.
Milaza dit :
02/10/2020 à 15:37
Efa manao ny ezaka rehetra tokoa ny Fanjakana FOIBE ka tokony himasoan’ny olona rehetra sendra vato nasodrotrin’ny tany avy amin’iny faritra iny kosa ny fifanomezan-tanana mba hanafoanana tanteraka ny Kéré zay efa atombokin’ny Filoha amin’ny Fanorenana ny Orinasa lehibe iarahana amin’ny orinasa NUTRISET
Famatsiana eto Antananarivo :: Toerana valo hametrahana fanadiovana sy famokarana rano